Aoka hasehony amin’ny fitondran-tena tsara ny asany amin’ny fahalemem-panahin’ny fahendrena – FJKM Ambavahadimitafo Aoka hasehony amin’ny fitondran-tena tsara ny asany amin’ny fahalemem-panahin’ny fahendrena |
Aoka hasehony amin’ny fitondran-tena tsara ny asany amin’ny fahalemem-panahin’ny fahendrena
Publié le 28 juin 2020 à 04:06
Alahady 28 Jona 2020, alahady fahatelo manaraka ny trinite, mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Mihavàna ao @ Tompo ».
Ny hafatr’Andriamanitra nentin’ny mpitandrina Rakotoarisoa Alain dia nalaina tao amin’ny Jakoba 3 : 13-18 :
« 13 Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin’ny fitondran-tena tsara ny asany amin’ny fahalemem-panahin’ny fahendrena. 14 Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mirehareha na mandainga manohitra ny marina. 15 Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny et? an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an’ny demonia. 16 Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mbamin izay asa ratsy rehetra. 17 Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy miahanahana na mihatsaravelatsihy. 18 Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin’ny fihavanana ho an’izay mampandroso ny fihavanana »
Manàsa anao hiombona amin’izao fanompoam-pivavahana izao :
Ny fanahin’ny fahamarinana sy ny fahendrena anie ry havana ho aminareo mandrakariva. Amen.